Crete, boqoradda xeebta ugu fiican Mediterranean | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Greece, Xeebaha
Xagaagu wuu soo dhowaanayaa marba marka ka dambaysa Griiguna wuxuu u muuqdaa meesha ay tagayaan dad badan oo horeyba loo sii qorsheeyey fasaxooda Mid ka mid ah goobaha ugu caansan waa Kereetee, tan ugu weyn uguna badan ee degan jasiiradaha Griiga.
Dhaqan jasiirad qadiim ah, taariikh dheer oo hodan ah, xeebo qurux badan, cunto dhadhan fiican leh, muusig caan ah oo wanaagsan iyo goobo qadiimiga ah oo aad u qiimo badan ayaa tilmaamaya jasiiradan maanta ah meesha aan u socono iyadoo rajo laga qabo inay berri noqoto meeshii aan u socon lahayn ... Sideen nahay tagitaanka Kereetee, maxaan ku qabannaa halkaas iyo waa maxay xeebaheeda ugu fiican:
1 Crete, badda Mediterranean
2 Sidee looga warwareegaa Crete
3 Xeebaha Crete
Crete, badda Mediterranean
Sidaan u sheegay Crete waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn uguna dadka badan jasiiradaha Griiga. Caasimadeedu waa magaalada Heraklion, magaalo sidoo kale lagu tiriyo inay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn dalka. Mid ka mid ah cutubyada ugu da'da weyn taariikhda ayaa dib ugu soo laabtay ilbaxnimadii Mycenaean iyo burburka Qasrigii Knossos iyo burburintii kale ee qadiimiga ahaa waa laga joogaa xilligaas, laakiin caasimadda hadda jirta sidoo kale waa magaalo qadiim ah tan iyo aasaaskeedii oo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad.
Heraklion waxay noqon doontaa albaabkaaga Kereetee. Halkan waxaa jira dekedda ganacsiga iyo dekedda doonta kuwaas oo ku keena ama kaa kaxeeya Santorini, Mykonos, Rhodes, Paros, Ios iyo dekedda Piraeus, oo ku taal Athens. Haddii aad ku timaaddo Giriiga diyaarad ka timid Ameerika, hubaal waxaad ka soo geli doontaa Athens si aad ugu xirto garoonka diyaaradaha iyo dekedda oo aad uga tagto diyaaradda illaa doonta. Ujeeddadu waa in la joogo illaa saddex maalmood caasimadda Giriigga ka dibna la tago.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii aad ka soo degtid Kereetee meelaha aad ka timaaddo ee Yurub waxaad toos ugu imaan kartaa sidii Waxay leedahay garoon diyaaradeed oo caalami ah. Waxay ku taal dhowr kilomitir, qiyaastii shan, waxay ka jirtaa magaalada, iyo Athens ka dib waa tan ugu mashquulka badan. Dabcan, duulimaadyo badan ayaa mara Athens. Duulimaadyada ugu raqiisan waa kuwa duulimaadyada qiimaha jaban sida Ryanair ama EasyJet, laakiin haddii aad safarto xagaaga had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato sida ugu macquulsan maxaa yeelay jasiiraddu waa mid caan ah.
Waxaa jira laba garoon diyaaradeed oo kale, muhiimad yar laakiin waxaa macquul ah in duulimaadkaagu isticmaalo midkood. Waxaa jira garoonka diyaaradaha ee militariga Daskalogiannis, ee Chania, iyo tan Haa eeddo, kaasoo uruurinaya kaliya duulimaadyada gudaha. Duulimaad u dhexeeya Heraklion ama Chania iyo Thessaloniki wuxuu socdaa 90 daqiiqo iyo Rhodes saacad. Hadaad tahay qof soo jiidasho leh waad isticmaali kartaa doonta laakiin wax badan ayey qaadataa.
Waxaa jira adeeg maalinle ah oo ka yimaada Piraeus inta lagu jiro sanadka gudihiisa iyo labo kale ayaa lagu daraa xagaaga. Laga soo bilaabo Santorini, Mykonos iyo jasiiradaha kale ee Cyclades waad ka qaadan kartaa catamarans dhakhso leh. Waxaa jira wadooyin kale oo ka yimaada jasiiradaha u dhow, laakiin waxaan u maleynayaa inay kuwani yihiin kuwa ugu badan ee lagula taliyo dalxiisayaasha. Waxaa jira shirkado dhowr ah: Anek, Jets Sea, Hellenic Seaways, LANE Lines, tusaale ahaan.
Haddii aad ku safreyso gaari, waa inaad ballansataa oo isku mid tahay haddii aad safarto habeenkii ama adeegyada degdegga ah. Waxaad ka iibsan kartaa tikidhada websaydhka shirkadaha (Badanaa way ka raqiisan yihiin matoorada raadinta), waxaana jira qiimo kala duwan marka loo eego qeybta iyo masaafada loo safrayo. Haddii aad arday tahay, weydii dhimista.
Sidee looga warwareegaa Crete
Marka hore waa in la yiraahdaa marka lagu daro Heraklion waxaa jira magaalooyin kale oo muhiim ah: Chania, Lassithi, Rethymno, Sitia, Agios Nikolaos iyo Ierapetra. Si aad ugu dhex wareegto jasiiradda waxaa jira adeeg gaadiid oo ka kooban basaska. Way jaban tahay oo waxtarkeedu yar yahay, in kasta oo aad ku dhici karto bas ka baxa jidka oo gala tuulo sababta oo ah rakaabka maxalliga ah ayaa codsanaya. Magaalada Heraklion waxaa ku yaalo labo boosteejo oo basaska laga raaco midkoodna wuxuu uruuriyaa adeegyada KTEL (kooxda basaska ka ganacsata).
Doorasho kale waa gaari ijaaran Laakiin maskaxda ku hay in kaararka deynta inta badan laga aqbalin xarumaha gaaska, dadku si aad ah uma ixtiraamaan calaamadaha taraafikada, darawalada maxalliga ah aad ayey u dagaallamaan jidkooda si ay u wareegaan oo baarkinka magaalooyinku waa ku yar yahay. Sidoo kale waxaa jira taksi Laakiin haddii miisaaniyaddaadu xadidan tahay, anigu kugula talin maayo maxaa yeelay waa adeeg qaali ah. Meelwalba waxaa ku yaal tagaasida, haa, iyo laba qiime: maalin iyo habeen.
Kereeti waxay leedahay xeebo badan. Xeebo waxaa ku yaal Chania, Heraklion, Rethymnon, Lassithi, Hersonissos iyo xitaa xeebaha dabiiciga ah. Biyaha xagaaga waa diirran yihiin, inta udhaxeysa 26 iyo 27ºC bishii Luulyo iyo 20ºC bishii Meey. Weligood aad uma qaboobaan sidaa darteed waxaa jira dad sidaas leh waa suuragal in dabaasha sanadka oo dhan. Xeebaha ugu deggan ee leh biyo diirran waa kuwa ku yaal xeebta woqooyi. Waxay sidoo kale leeyihiin badbaadiyo. Dabcan, dabayluhu way xoog badan yihiin waxayna abuuraan hirar sidaa darteed haddii aadan khibrad u lahayn dabaasha badda ... iska jir!
Xeebaha koonfurta xeebteeda had iyo jeer way yar yihiin dadka soo booqda waana taas sababta kaamamka qaar u doortaan inay teendhooyinkooda ka dhistaan, in kasta oo aan la oggolayn. Labada dhinacba haddii xeebtu habeysan tahay, waad kireysan kartaa kuraasta kuraasta iyo dalladaha inta udhaxeysa 5, 6 ama 7 euro. Waa ikhtiyaari, inkasta oo ay adiga kula muuqato in dalladaha ay qabsadaan jasiiradda oo dhan had iyo jeer waxaa jira qayb bilaash ah oo bilaash ah oo la dejiyo.
Xeebaha Crete waa amaan maxaa yeelay ma jiraan xayawaan khatar ah. Waxa kale oo jira xeebo dabiici ah, inkasta oo qaawinta si rasmi ah looma oggola, waa loo dulqaatay. Suurtagal maaha in la sameeyo a liiska ugu fiican xeebaha Crete maxaa yeelay way badan yihiin, laakiin xulashadayda iyo tan dad badan ayaa ah kuwa soo socda:
Kubadaha: Waa xeeb furan oo qurux badan, oo leh ciida cad iyo biyo turquoise ah. Waxaa lagu gaaraa gaari ama doon, laakiin ma jiraan bas ama badbaadiyo. Hooska dabiiciga ah midna maahan laakiin kuraasta iyo kuraasta kuraasta la kiraysto. Waa xeebta qaawinta biyo hooseeya. Waxay ku taal Chania.
Elafonis: sidoo kale Chania, waa xeeb aad loo heli karo maxaa yeelay waxaad halkaas ku imaan kartaa doon, bas, gaari ama lugo. Ciidda cad, biyaha xasilloon, dulqaadka loo dulqaatay, dadka duufaan, qof walba oo ku raaxeysta Calanka buluuga ah.
Wacay: Waa xeeb layaableh oo ku taal Lassithi, oo ay ku hareeraysan yihiin keymaha ugu badan ee Yurub ku yaal. Shan kun oo geed!
Preveli: waa xeeb ku taal Rethymno oo leh wabi qulqulaya badda, aad u qurux badan. Waxay xitaa sameysaa nooc ka mid ah harooyinka badda agteeda oo ku wanaagsan dabaasha.
Dila iyada: xeebta ugu caansan Heraklion. Waa xeebta hippie leh godad iyo muuqaal casaan leh. Waa xeeb abaabulan oo xagaa kasta waxay martigelisaa caan Bandhig faneed.
Agiofarango: Waa xeeb ku taal afka Canyon Agiofarago, oo leh boholo iyo boholo u dhow. Waxaa jira kaniisad ku taal San Antonio meel u dhow togaga qulqulaya badda, oo ku habboon in la cabbo biyaha haddii kuleylka uu gubto xeebta. Waxaad ku imaaneysaa adigoo lugeynaya buurta ama marinka ama doon.
Dunes of San Pavlos: waa la qaddariyo mid ka mid ah xeebaha ugu fiican CreteWaxay leedahay biyo diirran dadkuna waxay u yimaadaan raadinta asturnaanta. Waxaad ku imaan kartaa oo kaliya lug ama doon, ma jirto hooska dabiiciga ah laakiin waxaad kireysataa dalladaha.
Tixgeli taas Kereeti waxay leedahay in kabadan 1000 kilomitir oo xeeb ah marka ma jiraan tobanaan laakiin boqolaal xeebood, la yaqaan, caan ah, qarsoodi ah, go'doon ah. Laga soo bilaabo dhammaan iyo dhadhanka oo dhan. Haddii aadan haysan waqti aad ku aado xagaagan, tixgeli jasiiradda tan xigta ama laga yaabee xilli kale. Ku xilli hoose waa laga bilaabo Nofeembar ilaa Maarso, jawigu wuu ka nasan yahay, ama xilli dhexe oo ah bilaha Abriil ilaa Juun iyo Sebtember ilaa Oktoobar oo na siiya cimilada ugu wanaagsan ee tamashleynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Crete, boqoradda ugu fiican xeebaha Mediterranean
Wales: Luqadda iyo Diinta
Maratoonka ugu xiisaha badan uguna baahida badan adduunka